Inona no atao hoe ISBN? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny I	» ISBN
ISBN no fanafohezana ny International Standard Book Number.
ISBN dia laharana boky iraisam-pirenena. Ny ISBN dia isa 10 ny halavany hatramin'ny faran'ny Desambra 2006, saingy hatramin'ny 1 Janoary 2007 dia misy isa 13 foana izy ireo. Ny ISBN dia kajy amin'ny alalan'ny raikipohy matematika manokana ary misy tarehimarika fanamarinana hanamarina ny isa.